Firma EMBA spol ။ Paseky nad Jizerou ro s ကို - အခမဲ့ပရီမီယံဂီတ themes များစျေးကွက် downloads,
Homeသတင္းေၾကျငာခ်က္အဆိုပါကုမ္ပဏီ EMBA spol ။ s ကို ro Paseky nad Jizerou
အဆိုပါကုမ္ပဏီ EMBA spol ။ s ကို ro Paseky nad Jizerou	မှတ်ချက် Leave
ကုမ္ပဏီ EMBA အယ်လ်။ ro ့. Paseky nad Jizerou နှစ်ခု protected ဒေသများ၏နယ်မြေပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး - ဧရာမတောင်တန်းအဆိုပါအမျိုးသားဥယျာဉ်များနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဒေသများ ဧရာမတောင်တန်း မြစ် Jizera ၏ချိုင့်၌တည်၏။ ဤသည်ဧရိယာအရေးပါသောတိုးရစ်အဖြစ်အားကစားရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအားကစားစင်တာသာဖြစ်ပါတယ်။
ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့်အခါကုမ္ပဏီ၏သမိုင်း၏အစအဦး, ဒီနှစ် 1882 မှပြောပြတယ် ကတ္တရာစေးစက္ကူ။ ပထမဦးဆုံးထုတ်ကုန်အဖြူရောင်လက်ဖြစ်ကတ်ထူပြားခဲ့သည်။ လာမည့်ကာလအတွက်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုဒေသများ၏ချဲ့ထွင်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးသမိုင်းမှတ်တိုင်များထုတ်လုပ်မှု၏နိဒါန်းဖြစ်ပျက် ညိုသော paperboardaစုစုပေါင်းလေးလံသောကတ်ထူပြား။ 1971 ခုနှစ်တွင် 1989 ဒုတိယဘုတ်စက်လည်ပတ်လေးကို manual ကတ်ထူပြားစက်တွေများအတွက်အစားထိုးအဖြစ်ခဲ့သည်, ပထမဦးဆုံးအလိုအလျှောက်samosnímacíဘုတ်အဖွဲ့စက်တပ်ဆင်ပေးခဲ့သည်။
Zásadnímstrategickým krokem společnosti byl အဆိုပါ archive ကိုစနစ်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း, kterýkomplexnězajišťuje အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများသိမ်းဆည်း။ V ကိုsoučasnédobě firma rozšiřuje svoji nabídkuဏ ရုံးaကျောင်းကထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများဘယ်သူ့ထူးခြားမှုအဓိကအား LUXOR အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
EMBA ကုမ္ပဏီလီမိတက် 1998 အတွက်လက်ခံရရှိ အရည်အသွေးအစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အလက်မှတ်က ISO။ V ကို roce 2009 byla recertifikována Systems က ISO 9001 na: 2018, kterýdává jasnou informaci ဏúrovnizabezpečenířízeníတစ် kvality společnosti့။ Kvalita တစ်úroveňvýrobků byla současně ohodnocena řadouoceněnítuzemskýchဈzahraničních, jako například ယခုနှစ်ထုပ်ပိုး တစ်ဦး Worldstar ။ V ကို roce 2003 jsme získaliprávoဋužíváníochrannéznámky Ekologicky šetrnývýrobek na hladkou lepenku ze sběrovéhopapíru (nad 225 g / m2) တစ်ဦးvýrobky z ni လိုလားသူarchivnísystémy, krabice တစ်ဦး စာအုပ်ချုပ်သမား.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့်သင်တို့အဘို့ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြိုင်ဘက်တယောက်ခြေလှမ်းဖြစ်စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအပေါ်အလေးပေးကျွန်တော်တို့ကိုမသာပြည်တွင်း၌ဒါပေမယ့်လည်းကမ္ဘာစျေးကွက်များတွင်အောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ ငါတို့သည်ဤမျှလောက်များစွာသောကျေနပ်မှုဖောက်သည်ပြီးသားထဲမှာတွေ့ပြီ ကမ္ဘာတဝှမ်း 15 နိုင်ငံများ။ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏န်ထမ်းများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အချင်းများနှစ်ဦးစလုံးထုတ်လုပ်မှုအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အရည်အသွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များမှာ paperboard, tak PRI výroběfinálníchvýrobků။ 9001: spojení s ကိုcertifikací podle normy က ISO 2008့အကြှနျုပျတို့သညျအလှနျကောငျးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေး, တစ်ဦးပြည့်စုံသောမြေတပြင်လုံးသည်။ သငျသညျပြည့်စုံကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများနှင့်ထုပ်ပိုးများထုတ်လုပ်ယူရန်အဘို့အကျနော်တို့ချင်တယ်။
← အမြင့်ထံမှ Haje nad Jizerou 11.04.2018